Socod ku dhex mara Quarti Latin ah, oo ku taal Paris | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Paris, Maxaa la arkaa
Mid ka mid ah geesaha ugu soo jiidashada badan Paris waa Qeybta Latinka, dhinaca bidix ee Seine, shanaad jilbajoog ka yimid caasimada faransiiska. Waa Quarter-ka Laatiinka ah ee La Sorbonne, tusaale ahaan, ka mid ah hay'adaha kale ee waxbarashada, goob taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba muhiim u ah.
Makhaayadaha, makhaayadaha, dalxiisayaasha, ardayda, jardiinooyinka, matxafyada, dukaamada, degmadan ayaa caan ku ah sidaas safarka paris Ma dhammaystirna la'aanteed adigoo dhex maraya Quarter-ka Laatiinka.
1 Quarterka Latinka
2 Maxaa lagu arkaa xaafada Latinka
Magacu xaguu ka yimid? Laga soo bilaabo qarniyadii dhexe, markay ardayda Sorbonne deganaayeen xaafada iyo waxay u isticmaali jireen laatiinka luqad waxbarasho. Wax wali sii socda ilaa maanta, oo ah in goobta ay ka buuxaan arday. Qarniyadii 68aad iyo XNUMXaad isla ardaydaasi waxay abaabuleen dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee ugu muhiimsanaa xilligaas, tusaale ahaan, bishii May ee 'XNUMX' oo caan ahayd.
Marka waxa ugu fiican ee la sameeyo ka hor intaadan bilaabin inaad ku socoto halkan waa inaad wax yar ka akhrido taariikhda Quarter-ka Latin. Si looga faa'iideysto, loo fahmo loona yeesho muuqaal kale. Albaabka hore badanaa waa Goob de Saint Michel, oo leh ilaha masduulaaga. Marka laga gudbo sheybaarka waddooyinka ayaa laga furaa halka ay jiraan makhaayadaha iyo makhaayadaha, qaar leh dabaqyo, in kasta oo wadada ugu weyn uguna caansan ay tahay Rue Huchette.
Maxaa lagu arkaa xaafada Latinka
El Matxafka Cluny Waa madxaf yar oo leh khasnado laga soo qaatay qarniyadii dhexe. Waxay ka shaqeysaa degitaankii hore ee abtiyada Cluny halkaana waxaad ku arki doontaa lix cajalado caan ah oo adduunka ah oo loo yaqaan The Lady iyo Unicorn. Midab leh, gacmo lagu sameeyay, oo in ka badan shan qarni jiritaan ah.
Khasnadahaas waxaa u sii dheer, meeshu waxay leedahay beero qurux badan oo muddo lagu wareego. Dabcan, xilligan wuu xiran yahay. Waxay ku jirtaa dayactir iyo bishii Sebtember 29keedii waxay xirtay albaabbadeedii illaa 2022. Goob kale oo xiiso iyo caan ah ayaa ah Dukaanka buugaagta Shakespeare iyo Shirkadda, oo dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee ku yaal Paris laga furay 1919.
Dhismuhu wuxuu bilaabmay bilowgii qarnigii toddoba iyo tobnaad, markii uu ahaa guri keniisad ah, laakiin buugaagta lagu iibiyo buugaagta ayaa laga soo bilaabay 50-yadii Bakhaarku wuxuu u eg yahay alaab guri, biyaano, makiinado wax lagu qoro, iyo waxyaabo kale oo badan. Haddii aad iibsato buug, waxaa lagu shaabbadeyn doonaa astaamaha buugaagta lagu iibiyo, haddii aad doonaysana inaad ka ag dhowaato waxaad ku qaxweyn kartaa kafateeriyada deriska ah, oo ka eeganeysa Seine.
Pantheon Sidoo kale waxay ku jirtaa Quatika Latinka. Waxay mar ahaan jirtay kaniisad leh qubbad aad u weyn laakiin maanta waa cilmaani waxayna xushmeysaa geesiyaasha Faransiiska. Halkan waxaa ku aasan Voltaire, Victor Hugo, lamaanaha Curie iyo Antoine de Saint-Exupery iyo Louis Braille. Dhismaha waxaa amar ku bixiyay in loo dhiso Louis XV kaniisad ka dib markii laga bogsaday jirro sidaasna, waxaa lagu dhammeeyay 1791 iyadoo la heysto Gothic iyo hawo qaas ah.
Qubbadku waa weyn yahay oo furan yahay hoostiisana wuxuu ku yaal kan caanka ah Foucault pendulum (Ma akhriday buugga sharafta leh ee Umberto Eco?). Qalimku waa tijaabada Foucault si uu u muujiyo in Dhulku u meerto yahay.
Dhinaca kale, cirifka Latin Quarter-ka waa Jardiinooyinka Luxembourg, gaar ahaan maalmaha sabtida iyo axadda. Waxaa jira geedo badan, raadad, dad hadlaya ama sameynaya dhaqdhaqaaq jireed. Hareeraha balliga dhexe waxaa ku yaal kuraas lagu fadhiisto, wax aad u caan ah sidoo kale.
Qalbiga jardiinooyinku waa qasriga boqortooyada. Jardiinooyinka taariikhda laga bilaabo 1612 waxaana naqshadeeyay qayb ahaan Princess Marie de Medici, oo markaa ahayd Boqoradda Faransiiska. Maanta qasrigu wuxuu u shaqeeyaa sidii Golaha Guurtida Faransiiska. Jardiinooyinka waxay qariyaan in ka badan 100 farshaxanno iyo xitaa a nuqul yar oo miisaan ah oo loo yaqaan 'Statue of Liberty' taas oo hadiyad ahaan u siiyay Mareykanka Faransiiska. Waxa kale oo jira isha Medici oo qurux badan oo nabdoon.
Beer kale oo qurux badan ayaa ah Dhirta Dhirta, beero botanical ah oo leh in ka badan 4500 dhir kala duwan: beer ubax leh, beero alpine ah iyo jardiinada farshaxanka ee Art Deco. Waxa kale oo jira saddex xanaanooyin waaweyn oo ka bilaabmaya qarnigii XNUMXaad, dhismayaal bir ah iyo muraayado qurxoon. Ogolaashadu waa bilaash, laakiin haddii aad rabto inaad ogaato Zoo iyo Matxafka Taariikhda Dabiiciga ahWaa inaan bixiyaa khidmadda gelitaanka. Matxafka dambe waxaa ku yaal galbeel loo qoondeeyey macdanta, mid kale oo horumarineed iyo mid kale oo loo yaqaan 'paleontology'.
Matxaf kale oo xiise leh ayaa ah Matxafka Curie. Waxay ka shaqeysaa meeshii iyadu ka shaqeysay oo ay ku baratay shucaaca iyo hillaaca. Marie Curie, had iyo jeer waa mudan tahay in la xusuusto, waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ku guuleysata abaalmarinta Nobel isla markaana borofisar ka noqota Sorbonne. Halkan waxaa ku yaal aalado cilmiya oo qadiimi ah iyo beer yar oo qurux badan. Goobtu waxay furan tahay Arbacada illaa Sabtida markay tahay 1 ilaa 5 galabnimo.
Arimaha Kaniisadaha Quarter Latin waxaa jira afar xukuma muuqaalka: Saint-Etienne, saint-Severin, Saint Julien le Pauvre iyo Saint Mèdard. Dhamaan aad u qurux badan.
Socodka ka dib ama inta lagu jiro ama dhamaadka, makhaayadaha Faransiiska iyo makhaayadaha ayaa had iyo jeer nagu sasabiya inaan nasanno oo wax cunno oo wax cabno. Gudaha Fagaaraha Sorbonne waxaa ku yaal Les patios, makhaayad qurux badan. Albaabka xiga waa Tabac De La Sorbonne, oo ku fiican quraac macaan sii kordhaya.
Dabcan, waxaa jira boggag badan waxaanan u maleynayaa inay adiga kugu habboon tahay inaad soo ogaato waxyaabaha aad ugu jeceshahay. Kuwa badan ayaa jira oo waxaa fiican inaad naftaada iska dhaafto, ku warwareegto oo aad joojiso waxa ku soo jiidanaaya dareenkaaga.
Xaafadda Latin-ka waxay leedahay waddooyin qurxoon, fagaarayaasha yar-yar, dhismayaal taariikhi ah, taallooyin ay ku xardhan yihiin astaamo aad xiisaynayso akhriska, dukaamo noocyo kala duwan leh Sawir ah Daawashada Conciergerie Waan seegi waayey, sidoo kale. Waxay ku jirtay ganacsi illaa 1370 waana qayb weyn oo injineernimo ah. Mana socod gudaha ah Sainte Chapel. Sanado ka hor markaan tegey, waxay ku jirtay dib u soo celin welina qurux bay ahayd. Daaqadaha muraayadaha midabada leh ayaa qurux badan faahfaahintana…. Ilaahayow!
Haddii aad kireysato guri dabaq ah iyo jikooyin, markaa socod wanaagsan ayaa laga yaabaa inaad raacdo wadadii Julia Child, haweeneydaas oo ah diblomaasi Mareykan ah oo 50s qortay buug cunto karin ah. Julie iyo Juliku. Waxay ka adeegatay dukaanka Suuqa Rue Mouffetard. Dukaammada waxay furan yihiin 9-ka subaxnimo, waxay xirmaan duhurkii waxayna dib u furayaan galabtii.
Hadaad danaynayso Dhaqanka Muslimiinta, maxaa yeelay Paris sidoo kale waa la joogaa oo xaafada ayaa lagu matalaa Masjidka Weyn ee Paris, kan ugu weyn magaalada, oo la aasaasay 1926.
Dabcan jardiinooyinkeedu waa qurux badan yihiin waxayna leedahay makhaayad si weyn loogu taliyay iyo guriga shaaha. Dhinacyada isla safka ah ayaa ah Machadka Dunida Carabta, kaas oo sahamiya tabarucaadka cilmiga iyo dhaqanka ee Carabta. Dhismuhu waa qaab dhismeed casri ah oo uu naqshadeeyay Jean Nouvel dhammaadkii 80-yadii qarnigii XNUMX-aad. Furitaankiisu wuu xirmaa oo waa la furaa marka loo eego qoraxda.
Sidaad u jeeddo, Quaterka Latin ee Paris wuxuu leeyahay wax walba wax walbana kumuu niyad jabi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Paris » Socod ku dhex mara Quarter Latin ah, oo ku taal Paris